Malunga Nathi - Hebei JiBao Technology Co., Ltd.
IHebei Jibao Technology Co., Ltd.
Ifumaneka kwiSithili esitsha saseXiong'an kumbindi weBeijing-Tianjin-Hebei, enendawo entle kunye nezothutho ezifanelekileyo. Inkampani yethu igxile ekuveliseni iinwebu ezingangeni manzi kunye neziphefumlayo, iimbrane zokuthintela umphunga ezingangeni manzi, iphepha lokuphefumla, kunye nenwebu ezingangeni manzi kunye neziphefumlayo.
Namhlanje, xa ihlabathi likhuthaza ukugcinwa kwamandla kunye nokukhuselwa kwendalo, kunye neteknoloji yokuvelisa iklasi yokuqala kunye neenzuzo zoshishino, iyingqayizivele kwishishini lezinto zokwakha eziluhlaza. Umgangatho ogqwesileyo, inkonzo egqibeleleyo, uthutho olufanelekileyo, inkqubo yokubonisa kunye nexesha elifanelekileyo, ukwenzela ukuba iimveliso zigubungele onke amaphondo, oomasipala kunye nemimandla ezimeleyo kwilizwe lonke, isetyenziswa ngokubanzi kwiindonga zamakhethini, izakhiwo zentsimbi, izakhiwo zomthi, iivillas, njl., kwaye zithunyelwa kumazwe angaphandle IYurophu, iMelika, iAfrika, iRashiya, iOstreliya, iJapan, iSoutheast Asia namanye amazwe.
U-Hebei Jibao ubesoloko esenza iinqobo [ingqibelelo, ubuntu, ukubekwa emgangathweni, ukusungula izinto ezintsha] kunye nokusebenza, ethatha [ukunikezela ngemveliso yokonga amandla kunye nokwenza iimpawu zesizwe] njengoxanduva lwayo, kwaye izama ukuyakha ngetekhnoloji yemveliso yobuchwephesha, engqongqo. ulawulo, kunye nezixhobo eziphezulu. Umgangatho ophakamileyo wokukhuselwa kwendalo kunye neemveliso zokonga amandla, ukwenza imizamo engapheliyo ekufuneni ukuba yeyona nkampani ithembekileyo nehlonelwayo yezinto zokwakha ezintsha eziluhlaza.
Inkampani yethu ineengcali, ezikumgangatho ophezulu, ezikumgangatho ophezulu, ezijolise kumgangatho wemveliso, kwaye inguvulindlela ekuphuculeni okuqhubekayo kunye noyilo lwemveliso entsha. , Kwaye ineentengiso ezomeleleyo kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa, ukulandela umthengi kuqala. Hlala unamathela kwi-tenet "yophando oluqhubekayo, ukuveliswa kwezinto ezintsha, kunye nokufuna ukugqibelela" kunye nefilosofi yoshishino "yomgangatho wokuqala, inkonzo yokuqala", kwaye usebenzise iqela layo eliqinileyo lobuchwepheshe obuphezulu ukubonelela ngeenkonzo kubathengi.
Iimveliso zochungechunge lweshishini zisetyenziswa kakhulu kushishino, kwezolimo, kukhuseleko lwesizwe, ukhenketho lwezemidlalo, ucoceko, ukuphuculwa kwekhaya, ukupakishwa, ubomi kunye namanye amacandelo.
Inde indlela ekufuneka ihanjwe, kwaye abantu baseJibao baya kujongana namathuba kunye nemiceli mngeni yala maxesha.
Qhubeka ukutshixa kumbono "wokwenza uphawu lweMeiben lube luphawu olukhethwayo kushishino olungelukwanga".
Ukunyanzelisa umgangatho njengesitshixo soloyiso, kunye nokusungula izinto ezintsha njengesiseko sophuhliso lweshishini. Abathengi banguThixo;
Qhubeka nokuphumeza ingcamango yenkonzo "yovelwano, engapheliyo, enyanisekileyo".
Khetha iJibao kwaye uphumelele umsebenzi oqaqambileyo!
Froth-Pak, IVinyl Plank yoMgangatho woMvalo woMvalo, Umgangatho wangaphantsi odadayo, Umgangatho ongaphantsi koMgangatho woMphunga, Isithintelo soMphunga kuMacala omabini eInsulation, Ilaphu elingalukwanga,